Ciidanka DFS oo fashaliyay weerar lala damacsanaa Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fashiliyay Qarax gaari Hoomey lagu soo raray xilli uu mareyay deegaanka Xaawa Cabdi ee duleedka Magalada Muqdisho, kaas oo saraakiishu sheegeen in la doonayay in la soo geliyo Magalada Muqdisho.
Gaariga ayaa ku qarxay hareerta laamniga mana jirin cid ku waxyeelloka soo gaartay, sida uu sheegay Taliyaha 12-ka Apriil ee Ciidanka Xooga Dalka Generaal Tawane Axmed Maxamed .
Taliyaha Hoggaanka howlaha Ciidamada Booliska Axmed Dayid Dhego-caleen ayaa Ciidmada Xoogga Dalka uga mahadceliyay Howlgalka ay uga hortageen gaarigaas ku qarxay deegaanka Xaawa Cabdi sidoo kale waxa uu ku booriyay in ay ka foojignaadaan weeraro ay geystaan Al-Shabaab inta lagu guda jiro Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Dhinaca kale taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Ameeriko oo la hadalayay Qaar ka mid ah saraakiisha Ciidamada BooliskaSoomaaliyeed ayaa kula dar daarmay in si xooggan looga shaqeeyo baraha koontaroolada iyo saldhigyada si loo sugo amniga.
Ciidanka DFS iyo kuwa Mareykanka oo Weeraray Al Shabaab